भाजपा सरकारमा पिपिएस सुरक्षित छैन - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनभाजपा सरकारमा पिपिएस सुरक्षित छैन
भाजपा सरकारमा पिपिएस सुरक्षित छैन
October 2, 2020 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन 0
केशवराज पोखरेल, प्रवक्ता, गोजमुमो
पहाडका तीन जना स्वघोषित बाघहरूको गर्जन समय समय सुनिरहनु पर्छ पहाडले। एउटा बाघ दिल्लीको सी रूममा बसेर अडियो भिडियो पठाउँदै गर्जन्छन् : अडियोभिडियो बाघ। अर्को बाघ सिलगढीबाट इन्टरभ्यु मार्फत गर्जिन्छन् : इन्टरभ्यु बाघ । अनि अर्को बाघ विज्ञप्ति मार्फत गर्जन्छन् : पेपर बाघ।
यी तीनै बाघमा समानता के छ? तिनै बाघले पहाडको जनजिब्रोमा रहेको गोर्खाल्याण्डलाई हटाएर पिपीएस भन्ने नयाँ चिप्स बेचेर गत चुनावमा भोट जितेर गएका हुन।
के बाघ गर्जँदा पहाड डराउँछ? राज्य सरकार थर थर काँप्छ? यी बाघहरूको विश्वास छ यस्तै हुन्छ। यसलाई भन्छ -ओवर कन्फिडेन्स।
“बेटी बचाओ” को नारा दिएर भाजपाको मोदी सरकारले छोरीलाई महत्व दिएर काम गर्ने प्रण गरेथ्यो। भर्खरको उत्तर प्रदेशको हाथरस अनि बलरामपुरको घटनालाई हेर्नुहोस्। यी दुई छोरीहरू दलित परिवारका हुन्। यी दुईको सामूहिक बलात्कार भयो। दुईको हत्या भयो। अनि परिवारको परामर्श बिना नैं मध्यरातमा उनीहरूको शव को अन्तिम संस्कार भयो।
राती शव संस्कार गर्नु हिन्दू परम्पराको विरूद्ध हो। आस्थामाथि आघात पुऱ्याउनु हो। गोदी मीडिया यो घटना लुकाउन प्रयासरत छन्। एकतर्फ बेटी बचाओ भन्छन् अनि अर्कोतिर त्यही बेटी असुरक्षित छन्।
यी दुवै अमानवीय घटनाको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा घोर निन्दा गर्छ। यी ‘निर्भयाहरूले’ न्याय कहिले पाउला?
भाजपाको योगी राज अनि मोदी सरकारमा कुनै महिला सुरक्षित छैनन्। बङ्गालमा यदि भाजपा सरकार आए हाम्रा चेली बेटी सुरक्षित हुने छैनन्
यी तीनै बाघहरू आफ्नो आँखा अघि छोरीहरूको बलात्कार अनि हत्या हुँदा एक शब्द पनि बोल्दैनन् कारण यी घटना भाजपाको सरकार भएको उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेशको छोरी हाम्रो छोरी कहाँ हुनु सक्छ? यी हुन् हाम्रा पाखण्डी बाघहरू।
जसरी बेटी बचाओ भनेर मिठो नारा दिएर महिलालाई आकर्षित गरियो त्यसरी नै हाम्रो पहाडमा पनि पिपिएसको नयाँ नारा दिएर भोट जितेर गएका हुन् भाजपा अनि गठबन्धनले। तर यो नारा केवल नारा भएर रह्यो। संसदको फ्लोरमा जिरो आवरमा अलिकति आवाज उठ्यो विज्ञापन जस्तो। तर यो विज्ञापनलाई कुनै पनि सांसदले किनेनन्। आफै उत्पादन गर्ने भाजपा धरिले यो विज्ञापन बन्द गरे। भन्नुको मतलब जसरी भारतका बेटी सुरक्षित छैनन् त्यसरी नै पिपिएस पनि सुरक्षित छैन। पिपिएस गोर्खाको भोट हत्याउने एउटा विज्ञापन मात्र भएर रह्यो, भाजपाको सङ्कल्प पत्रमा। गोर्खाल्याण्ड त तुहाई सक्यो गठबन्धनले। अहिले तुहाएको गोर्खाल्याण्ड फर्काईदे भनेर सडकमा कराउँदैछन् त्यही गठबन्धनका दलहरू।
राजु विष्टजीलाई फेरि स्मरण गराउनु चाहन्छु, तपाईँको विजय यही गोर्खाल्याण्डको नाममा भएको हो। तपाईंको विजय विकाशको निम्ति भएको होइन। न त ममतालाई गाली गर्ने योग्य गोर्खा भनेर भएको हो। तपाईंलाई विजय गराएको दार्जीलिङ नगरपालिका हत्याउन पनि होइन। तपाईंको विजय जीटीए भङ्ग गर्नु भनेर विज्ञप्ति दिनु पनि होइन। तपाईंलाई विपुल मतले पहाडका गोर्खाले जिताएका हुन गोर्खाल्याण्ड स्थापनाको निम्ति।
जब तपाईंको काम गोर्खाल्याण्ड स्थापना गर्नु हो भने, तपाईँको कुरा नै नचल्ने किन क्षेत्रिय मुद्दा जस्तै जीटीए, विकास आदिमा तपाईं हस्तक्षेप गर्नु हुन्छ? किन भन्नु सक्नु हुँदैन कि गोर्खाल्याण्डको मुद्दा मेरो हातबाट निस्किसक्यो? मैले मेरो आफ्नै गोर्खा सन्तानलाई धोका दिएँ। मेरो पार्टी भारतीय जनता पार्टी झुटको राजनीति गर्ने पार्टी हो।
अब त म झन् सांसद मात्र होइन राष्ट्रिय प्रवक्ता भएको छु, गोर्खाल्याण्ड विषय बोल्नु भन्दा चुप बस्नु ठीक। मेरो पार्टीलाई वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड देखि नै एलेर्जी छ। यी सब किन भन्नु सक्नु हुन्न? तपाईंले आफ्नो विज्ञप्तिमा उठाउनु भएको सबै मुद्दा गोर्खाल्याण्ड हुने बितिक्कै समाधान हुनेछ। नत्र भने तपाईंलाई गाली गर्ने, विनय, अनितको दोष देखाउने एउटा बहाना मात्र हो।
अब चुनाव झन् नजिक आउँदैछ। पहाडका जनताले यी बाघहरूको गर्जन झन् बेसी सुन्नु पर्नेछ। तर पहाडका जनता सचेत भएका छन्, बुझ्ने भएका छन्। कुन गर्जन धम्कीको हो, कुन गर्जन कृतिम हो राम्ररी छुटाउनु सक्छन्। जबसम्म अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड स्थापना हुँदैन तबसम्म जीटीए बङ्गाल कै एक अभिन्न अङ्ग हो। पहाडको विकास बङ्गालसँग लडेर होइन जोडेर हुनेछ यो हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारको व्यावहारिक विश्वास हो।
हामीलाई पहाडको हराएको गरिमा पुनः फर्काएर ल्याउनु छ। पहाडकी रानी दार्जीलिङ लाई पुनः रानी बनाउनु छ। यो रानी बनाउने काम गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गर्दैछ, जबसम्म रानीको आफ्नै साम्राज्य हुँदैन। हामी व्यावहारिक कार्यमा विश्वास गर्छौ, अडियो, भिडियो, इन्टरभ्यु, विज्ञप्ति हाम्रो निम्ति हाम्रो कामको प्रचार गर्ने सञ्चारका माध्यम मात्र हुन्। राजनीति अनि विकास हामी जनताको माझमा बसेर गर्छौं, हाम्रो हातले गर्छौं।
विमल गुरुङको घर फिर्ती र सस्पेन्स
झाऱ्यो सेनाः सीआरपीको छापामारी जारीः सिंहमारीमा फाइरिङ-फेरि एकको मृत्युः जम्मा तीनको मृत्यु (39,313)
दार्जीलिङमा फेरि भड्कियो हिंसाः गोलीबारीमा एक पुलिस अधिकारीको मृत्युःजारी छ गोलीबारी (34,846)
विमल गुरूङले आज अचानक खुलासा गर्दै भने-दिल्लीले बोलाउँदैछ, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने मात्रै जान्छुः गुरूङ उत्रिए सांसदको राजिनामा मागको विपक्षमा (31,890)
मोर्चाले केन्द्रलाई दियो अल्टिमेटमः भन्यो- 8 अगस्त6बजीभित्र केन्द्रले वार्ता बोलाएन भने9अगस्तदेखि आन्दोलन कठोर गर्नेछौँ (29,838)
विमल गुरूङले भने, ‘तयारी बस्नु, म आउँदैछु’ : विमलको स्वागतमा लाखौं जनता सडक उत्रने (23,662)
पिसाबमा रगत बग्न थाल्यो, तरै पनि अनशनकारीहरू भन्छन्, दबाई होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ (21,878)
गिरी टोली दिल्लीमाः मोर्चाको कार्यनीतिमा फेरबदलः केन्द्रले देशको सुरक्षाको हवाला दिएर मोर्चालाई सम्झौतामा ल्याउन सक्ने सूत्रको शङ्का (21,639)
वरूण मृत्यु मामिलामा धेरैवटा सनसनीपूर्ण खुलासा: “मोर्चाको अर्को गुटले भनेको थियो, ‘तेरो दाजुलाई जेलबाट निकाल्नु छ भने हाम्रो गुटमा आइज, तर हामीले सम्झौता गरेनौँ’ (21,133)
केन्द्रिय गृहमन्त्रीको निम्तोः गोजमुमो-जीएमसीसी टोलीको दिल्ली प्रस्थान (21,021)
पवारले दिए गृहमन्त्रीलाई त्रिपक्षीय वार्ताको दबाउ: केन्द्रले चाँड़ै वार्ताको प्रस्ताव दिनेछ: राजनाथ (19,715)
टिस्टा भेल्लीमा चार पुलिस कर्मी घाइतेः बतायो पुलिस र स्थानीयले बेग्लाबेग्लै कथा (19,675)
बन्द खोल्ने नखोल्नेबारे निर्णय गर्ने दायित्व मोर्चाको हो- विमल गुरूङ (19,094)